ရိုးရှင်းသော်လည်း စွမ်းအားရှိသည်။ သခင်ယေရှု၏ အသေခံခြင်းသည် မည်သည့်အဓိပ္ပါယ် ဆောင်သနည်း? - Understanding the ancient promise to all mankind
Home » ရိုးရှင်းသော်လည်း စွမ်းအားရှိသည်။ သခင်ယေရှု၏ အသေခံခြင်းသည် မည်သည့်အဓိပ္ပါယ် ဆောင်သနည်း?
ရိုးရှင်းသော်လည်း စွမ်းအားရှိသည်။ သခင်ယေရှု၏ အသေခံခြင်းသည် မည်သည့်အဓိပ္ပါယ် ဆောင်သနည်း?